သတင်းပဒေသာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 94
သတင်းနှင့် ဓာတ်ပုံများ – http://www.facebook.com/PopularNewsJournal မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၂မပွင့်ဖြူပြုံး နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်အတွင်း ဒီချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စည်းရုံးရေးဆင်းပြီး အပြန်တွင် လောက်လေးခွဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့် အောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ဦးခေါင်း၌ အတွင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
မန္တလေး နန်းတွင်းစစ်တပ်ဂိတ်က ဗိုလ်ချုပ်ပုံ ခွာခိုင်း ရွှေအောင်/DVB http://burmese.dvb.no မတ် ၂၀၊ ၂၀၁၂ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ဦးဆောင် တည်ထောင်ခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ အနာဂတ် စစ်တပ် ခေါင်းဆောင်တို့က သူ့ဓာတ်ပုံအား လူမြင်ကွင်းမှ ဖျောက်ဖျက်ကြလိမ့်မည် ဆိုသည်ကို စစ်တပ်ဖခင် သိရှိမသွားခဲ့ပေ။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ တင်ဆောင်ထားတဲ့ ကား ၁ စီး ဟာ မန္တလေး နန်းတွင်းကို ၀င်ရောက်ရာမှာ ကားမှန်မှာ ကပ်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို တပ်လုံခြုံရေးက ခွာခိုင်းလို့ ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဇာဏီ/Burma VJ Media Network မတ် ၁၈၊ ၂၀၁၂ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ကျန်ရှိနေသေးသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အကျဉ်းသား ဝတ်စုံနှင့် သံခြေကျင်းကို ဝတ်ဆင်ပြီး တကိုယ်တော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသည့် No tags for this post. Related posts No related posts.
ဝေမိုး (မြစ်မခ-ကျောက်ပန်းတောင်း) Myit Makha Mediagroup မတ် ၁၆၊ ၂၀၁၂ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက် ၊ ကျေးရွာများတွင်လည်း မဲစာရင်း လွဲမှားခြင်း ၊ မဲပေးနိုင်သည့် No tags for this post. Related posts No related posts.
Yangon Press International မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၁၂တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လားရှိုးမြို့ ဟောပြောပွဲအတွက် ရန်တိုင်းအောင် ဆုတောင်းပြည့် မြို့ဦး စေတီ အနီးတွင် ပြင်ဆင်ထားသည် (ဓာတ်ပုံများ – ဆိုင်းဆွတ်/Yangon Press International) လာမည့် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ တွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး No tags for this post. Related posts No related posts.